Shina CPLA + akorandriaka mifototra maoderina vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika misy fanavaozana 7 santimetatra vita amin'ny makiazy. Gianty
CPLA + Bamboly akorandriaka mifototra amin'ny plastika tsy misy kitapom-batsy azo refesina 7 inci
Ny asidra poly-lactic crystallized, na CPLA, dia polymer miorina amin'ny zavamaniry ampiasaina amin'ny hoso-doko. Amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fibre Bamboo, mahatonga ny cutlery ho voajanahary sy lamaody kokoa. Ny koba CPLA compostable dia matanjaka ary mafy orina amin'ny fandefasana hafanana amin'ny hafanana. Ny koba vita amin'ny plastika dia azo ampiasaina amin'ny lasopy mpizara, lovia vary, na sakafo hafa ho an'ny sakafo ivelany na anatiny.
CPLA (Crystal PLA) no fitaovana biodegradable vaovao vokarina kristaly molekiola mifototra amin'ny fitaovana PLA. Ny CPLA dia manana fahatsaram-po tsara, ara-teknika no mamahana izany olana ratsy amin'ny fanoherana ny mari-pana ao amin'ny PLA izany, ny hafanana tafakatra hatramin'ny 85 ° C. Izy io dia singa mando klorida tsy misy fotony ary tsy mampidi-doza. Tsy misy fofona hafahafa ary tsy leaky. Ny CPLA dia vokatra feno biodgradable sy mahafinaritra ny tontolo iainana. Ny vokatra CPLA dia azo atao anaty solosaina ao amin'ny trano fivarotana varotra kely toy ny andro 180 andro, ny fahapotehana 100% mitranga mandritra ny fotoana kelikely kokoa, avy amin'ny voajanahary voajanahary izany.
Ny Institut Products and Biodegradable (BPI) dia fikambanana tsy tombotsoan'ny olona manan-danja sy vondrona avy amin'ny governemanta, ny indostria ary ny akademia. Ny programa fanamarinana BPI dia mampihatra fisedrana miorina amin'ny siansa mba hanaporofoana fa miangona ny akora iray ao an-tanàna na fivarotana ara-barotra ary tsy hamela kitapo plastika misy poizina na maharitra amin'ny tany.
• Ny voajanahary sy ny lamaody kokoa
Item CPLA 7 inci Knife
Material PLA + Seraton'ny kawana
Haben'ny baoritra 35 * 19 * 17cm
Item Fantsom-bidy 7 inci
Haben'ny baoritra 36 * 20.5 * 21.5cm
Item CPLA 7 santimetatra
Haben'ny baoritra 33 * 20.5 * 23cm
Previous: CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy alikaola azo averina
Manaraka: CPLA + Bamboly akorandriaka vita amin'ny plastika azo alaina azo vita amin'ny plastika misy enina 6 santimetatra